Cron & crontab, kọwara | Site na Linux
Lucain bipụtara nwa mgbe gara aga nkuzi magburu onwe ya na cron na crontab na m chere na o bara uru ikesa. Cron bụ ụdị nke ya na Ihe Omume ahaziri na Windows, naanị na a na-edozi ya site na njedebe. Ndị na-ahọrọ ihe nlere anya iji nweta otu ihe mgbaru ọsọ, nwere ike ịhụ nke a ihe ọzọ.
1 Gịnị bụ cron?
3 Gịnị bụ Crontab?
4 Iji crontab
5 Tinye ọrụ na crontab
Aha cron sitere na Greek chronos nke pụtara "oge." N'ime sistemụ arụmọrụ Unix, cron bụ njikwa usoro usoro (daemon) nke na-arụ ọrụ ma ọ bụ ederede na oge oge (dịka ọmụmaatụ, nkeji ọ bụla, ụbọchị, izu, ma ọ bụ ọnwa). Usoro a ga - egbu egbu na oge a ga - egbu ha ka akọwapụtara na faịlụ crontab.
The cron daemon na-amalite site /etc/rc.d/ o / wdg / ntinye.d. dabere na nkesa. Cron na-agba ọsọ n’azụ, na-enyocha tebụl ọrụ crontab na nkeji ọ bụla / wdg / crontab ma ọ bụ / var / spool / cron na ịchọ ọrụ aga-arụzu. Dịka onye ọrụ, anyị nwere ike itinye iwu ma ọ bụ ederede na ọrụ iji cron iji rụọ ọrụ ụfọdụ. Nke a bara uru dịka ọmụmaatụ iji gbanye mmelite nke sistemụ ma ọ bụ ezigbo usoro nchekwa.
Gịnị bụ Crontab?
Crontab bụ faịlụ ederede dị mfe na-echekwa ndepụta nke iwu a ga-egbu n'oge onye ọrụ akọwapụtara. Crontab ga-elele ụbọchị na oge mgbe edere edemede ma ọ bụ iwu a ga-egbu, ikike igbu ya na ọ ga-eme ya na ndabere. Onye ọrụ ọ bụla nwere ike ịnwe faịlụ crontab nke ha, n'eziokwu / wdg / crontab A na-eche na ọ bụ faịlụ crontab mgbọrọgwụ onye ọrụ, mgbe ndị ọrụ nkịtị (yana mgbọrọgwụ) chọrọ iwepụta faịlụ crontab nke ha mgbe ahụ anyị ga-eji iwu crontab ahụ.
Crontab bụ ụzọ kachasị mfe iji jikwaa ọrụ cron na sistemụ ọtụtụ ndị ọrụ, ma ọ bụ dị ka onye ọrụ sistemụ dị mfe ma ọ bụ onye ọrụ mgbọrọgwụ.
Anyị na-amalite site na ihe atụ dị mfe.
Anyị ga-akpaghị aka melite usoro, iji kpochapụ manụ nke "M ga-emelite yana enweghị m mmasị na nke a!"
Nke mbu anyi g’eme edemede. A ga-akpọ edemede a site na cron ma nwee ntuziaka niile anyị chọrọ ka ọ mee, yabụ ọ dị mkpa ịnwale ya n'ọtụtụ ọnọdụ na n'ọtụtụ ụzọ tupu etinye ya na cron, edemede mmelite dị mfe dị ka nke a:
Wepu # gị distro ahịrị. Ọ bụrụ na ọ bụ Ubuntu / Debian, ọ na-amalite site na apt-get.
Anyị na-echekwa edemede ahụ dị ka update.sh (dịka ederede ndekọ ndekọ ụlọ gị). Anyị na-agbanwe ikike igbu nke edemede a kwuru na:
chmod a + x ~ / edemede / update.sh
Anyị na-agba edemede ahụ oge ole na ole iji nyochaa na ihe niile na-aga nke ọma, anyị gbanwee ihe dị mkpa (ọ gaghị enwerịrị njehie, ọ bụrụ na ọ bụghị cron ga-emeghachi njehie ugboro ugboro). Ugbu a iji tinye ọrụ na crontab anyị.
Tinye ọrụ na crontab
Anyị na-egbu crontab mbipụta nke crontab -e, na ụfọdụ distros (dị ka Ubuntu) ọ na-enye anyị nhọrọ ịhọrọ ederede ederede anyị chọrọ, ndị ọzọ anyị hapụrụ vi. Faịlụ crontab ga-adị ka nke a.
# mh dom mon dow iwu onye ọrụ
m kwekọrọ na nkeji a ga-egbu edemede ahụ, uru sitere na 0 ruo 59
h oge ahụ, a na-edozi usoro elekere 24, ụkpụrụ ndị ahụ sitere na 0 ruo 23, yana 0 bụrụ 12: 00 n'etiti abalị.
Dom na-ezo aka ụbọchị nke ọnwa, dịka ọmụmaatụ ị nwere ike ịkọwa 15 ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgba ọsọ ụbọchị 15 ọ bụla
dow pụtara ụbọchị nke izu, ọ nwere ike ịbụ ọnụọgụ (0 ruo 7, ebe 0 na 7 bụ ụbọchị ụka) ma ọ bụ mkpụrụedemede mbụ nke atọ na bekee: mon, tue, wed, thu, fri, sat, sun.
onye ọrụ akọwapụtara onye ọrụ nke ga-eme iwu ahụ, ọ nwere ike ịbụ mgbọrọgwụ, ma ọ bụ onye ọrụ dị iche ma ọ bụrụhaala na ha nwere ikikere iji mepụta edemede ahụ.
iwu na-ezo aka n'iwu ma ọ bụ ụzọ zuru oke nke edemede a ga-egbu, ọmụmaatụ: /home/usuario/scripts/update.sh, ọ bụrụ na ọ kpọọ edemede ọ ga-ewepụ ya
Iji kọwaa ihe atụ ole na ole nke ọrụ cron kọwara:
15 10 * * * onye ọrụ /home/user/scripts/update.sh
Ọ ga-agba ọsọ update.sh na 10: 15am kwa ụbọchị
15 22 * * * onye ọrụ /home/user/scripts/update.sh
Ọ ga na-agba ọsọ update.sh akwukwọ na 10: 15 pm kwa ụbọchị
00 10 * * 0 mgbọrọgwụ apt-get -y update Root user
Ọ ga-eme mmelite kwa Sunday ọ bụla na 10: 00am
45 10 * * anyanwụ mgbọrọgwụ apt-get -y update
Mgbọrọgwụ onye ọrụ ga-agba ọsọ mmelite na Sunday ọ bụla (Sun) na 10: 45am
30 7 20 11 * onye ọrụ /home/usuario/scripts/update.sh
Na November 20 na 7: 30 onye ọrụ ga-agba ọsọ edemede ahụ
30 7 11 11 onye ọrụ Anyanwu /home/usuario/scripts/pastel_con_velitas.sh
Na Nọvemba 11 na 7:30 am na nke ahụ bụ Sọnde, onye ọrụ ga-eme sysadmin ya (ya bụ, m)
01 * * * * onye ọrụ /home/usuario/scripts/molestorecordatorio.sh
Ihe ncheta na-akpasu iwe kwa nkeji ọ bụla kwa ụbọchị (B NOTGH recommended aro).
A ka nwere ike ijikwa ha pụrụ iche àmà:
Na 5:30 n’ehihie kwa ụbọchị site na Mọnde ruo Fraịdee.
00 12 1,15,28 * * Nwere
Na elekere iri na abụọ nke mbụ, nke iri na ise na 12 nke ọnwa ọ bụla (dị mma maka ịkwụ ụgwọ)
Ọ bụrụ na nke a bụ ihe mgbagwoju anya, ejiri crontab eriri pụrụ iche iji kọwaa usoro ndị a.
@ reboot Gbaa otu ugboro, na mbido
@oge na-agba ọsọ naanị otu ugboro n'afọ: 0 0 1 1 *
@nke obula dika @yearly
@onwa na-agba ọsọ otu ugboro n'ọnwa, ụbọchị mbụ: 0 0 1 * *
@weekly Weekly nkeji mbụ na elekere mbụ n'izu. 0 0 * * 0 ″ XNUMX
@ kwa ụbọchị, na 12:00 AM 0 0 * * * * * *
@hourly na nkeji mbụ oge ọ bụla: 0 * * * *
Ojiji ya dị mfe.
@hourly user /home/user/scripts/molestorecordatorio.sh @monthly user /home/user/scripts/backup.sh @daily root apt-nweta melite && apt-nweta -y nweta nkwalite
Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ:
Nchịkwa ọrụ Cron
Dochie faịlụ crontab dị ugbu a na faịlụ akọwapụtara onye ọrụ
Dezie faịlụ crontab onye ọrụ, ahịrị ọhụụ ọ bụla ga-abụ ọrụ crontab ọhụrụ.
Depụta ọrụ crontab niile nke ndị ọrụ
Hichapụ crontab onye ọrụ
Na-akọwapụta ndekọ crontab onye ọrụ (nke a ga-enwerịrị ihe onye ọrụ dere ma mee ikikere)
Crontab -u onye ọrụ
nganiihu iji jikwa crontab onye ọrụ ọzọ, ihe atụ:
$ sudo crontab -l -u mgbọrọgwụ $ sudo crontab -e user2 #crontab -d -u onye ọrụ
Ngwaọrụ a, dịka ọtụtụ ndị ọzọ, enwere ike ịhụ n'ọbara dị omimi na n'uju n'uju:
Akwụkwọ ntuziaka Cron
Crontab na wiki ubuntu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Cron & crontab, kọwara
Alvaro Ortiz dochie ihe oyiyi dijo
Ugh ... a bit mgbagwoju anya.
Zaghachi Alvaro Ortiz
* / 30 na-efu (na mpaghara nkeji) nke na-agba ọsọ ọ bụla 30 nkeji ...
M na-aga ịza ajụjụ na nke a ruo mgbe m kpebiri inyocha ihe ndị a 😀
Ihe ndozi a bu ihe omuma di oke nkpa na ihe bara oke uru.
Ugbu a, ana m anwale otu nhazi ọ bụla nkeji iri anọ na ise.
* / 45 * * * *, na ntuziaka a na-eme na nkeji iri anọ na ise nke elekere ọ bụla NA awa ọ bụla. Nke ahụ bụ ikwu:
Ọ na-agba na 3:45, mgbe ahụ 4:00, 4:45, mgbe ahụ 5:00, 5:45, 6:00, 6:45, na na.
Enwere m ihe na-ezighi ezi? Kedu ihe m ga - eme iji mee ya naanị oge 45 ọ bụla, ma ọ bụ opekata mpe otu oge na nkeji iri anọ na ise kwa awa.
Ndewo nnukwu bara uru na ozi iji dokwuo anya otú cron si arụ ọrụ.
Zaghachi ka Slack
Magburu onwe ya, daalụ maka ịkọwapụta etu cron si arụ ọrụ .. ka anyị tinye obere aka 🙂
Ahịrị a dịka m ghọtara na a ga-egbu ya na 10: 15pm, mezie m ma ọ bụrụ na m mehiere
Ọ dị mma, ọ na-ekwu 10: 15am
Nnọọ! ezigbo Ama.
Iji mepụta Akwụkwọ edemede kwa ọkara awa, ahịrị nke a ga-atụkwasị na CronTab ga-abụ: "30 * * * * root Scrip.sh" Correct? Daalụ nke ukwuu!
Ọ bụrụ na m na-echeta n'ụzọ ziri ezi, n'ihi na ị ga-etinye / 30 * * * * mgbọrọgwụ Scrip.sh.
Nke ahụ bụ, gbakwunye / tupu 30.
Ndewo m masịrị post gị, ọ zuru oke mana achọrọ m ịjụ gị ihe.
Ana m enwe nsogbu na iwu a na otu dị ka "na".
Achọrọ m ịgba ọsọ edemede na oge ụfọdụ ma tinye
na -f /home/mi_user/Desktop/script.sh 18:08 ihe atụ
na edemede na-adịghị gburu na ihuenyo.
Na cron otu ihe ahụ na-eme m, ana m edezi faịlụ crontab ahụ na "crontab -e"
na njedebe m tinye akara a:
na ọ naghị eme ihe ọbụla, ọ naghị egosi edemede.
Aro ọ bụla? Daalụ nke ukwuu ma rịọ mgbaghara maka nsogbu ọ bụla
Maka ọnụ ka ọ pụta, ịnwere ike ịgbanye ọnụ ma nyefee edemede ahụ ka ọ bụrụ oke.
Oke iji jiri nwere ike ịdị iche na-adabere na njiko emulator ị na-eji.
Enwere m olileanya na ọ na-arụ ọrụ.
Ekelere onyinye a.
Ihe 10 !!
izu 2 !!
I meela nke ukwuu, ọ nyeere m ezigbo aka ịkọwa ụfọdụ ihe, ngụkọta ekele, maka nkọwa ndị ọzọ ma ọ bụ obi abụọ m ga-aga na PAGE nwoke, gaghachi m ekele.
nwoke ana m ekele gị nke ukwuu, M na-agụ ma na-anwale ihe atụ. imeela nnọọ ... ọ bụ nnọọ ihe kwere nghọta. Cheers
Ejiri m 12.04.2 LTS ubuntu, na ụdị nke crontab nke m nwere, ihichapụ ndepụta nke ọrụ onye ọrụ, crontab -r (na -l, dị ka akwụkwọ ntuziaka a si kwuo). Jide n'aka na ọ bụ ajụjụ nke nsụgharị.
N'aka nke ọzọ, m na-agba ọsọ naanị crontab na ụdị a ka m mepụta faịlụ m, mana nke a abụghị nke a na-egbu. Onye na-agba ọsọ bụ nke dị na / wdg / crontab. ma eleghị anya mmadụ ga-eji ikwu.
PS (Achọrọ m ebe na ebe crontab mana ọ weghachitere adreesị ahụ e kwuru n'elu na faịlụ ọzọ ezoro ezo, yabụ ọ bụrụ na nke ahụ gburu bụ nke dị na / wdg / crontab, mana mgbe m na-eme iwu crontab -e, m pụtara ya na oru nile m kowara) ebee ka echekwara fayel a '???? Banyere. Ana m abanye na mgbọrọgwụ mgbe niile.
Magburu onwe ya, bara ezigbo uru !!!
Ndewo, m ga-achọ ime nke a ………… «15 10 * * * mgbọrọgwụ ifdown eth0»
nke ahụ bụ ịsị na n'otu oge netwọk kaadị agbanyụrụ ………… nke ọma, etinye m na crontab ma ọ naghị arụ ọrụ …… .. kedu nke na-eme?
Agbaghara ịkọwa "mon" mgbe aha ahụ bụ "Tinye ọrụ na crontab"
Isiokwu ahụ ka dịkwa mma, cron bara oke uru.
Olee otú mma bụ na ezi post, jụọ m
Ọ bụrụ na m chọrọ ịdekọ ihe ndekọ ndị ahapụ site na mmezu nke ọrụ, ebee ka m ga-ahụ ya?
na-decdir m chọrọ ịhụ akụkọ ihe mere eme nke omume mere n'oge gara aga nke faịlụ a na m chọrọ ịhụ onye gbanwetụrụ ya na ụbọchị
Achọrọ m ịlele mgbanwe akụkọ ihe mere eme nke a
kedu ka m ga-esi mee ya
Echere m na na ederede ubuntu ị mehiere, ị tinyela nkwalite-ap-nkwalite karịa ịkwalite-inweta -y nkwalite. (Havehapụwo t).
Zaghachi Andrés Ledo
Otú ahụ ka ọ dị. Daalụ!
Achọrọ m ịma otu esi emepụta cron faịlụ ka m nwee ike ịkọwa oge ọ bụla mgbe emere ya, ndekọ, wdg.
Daalụ maka ịkọwapụta ọrụ na iwu ndị bụ isi maka cron, ugbu a iji mee onwe gị obi ụtọ ntakịrị.
Mgbe obula m choro ihe omuma n’onu obula metutara Gnu / Linux m na agaghari na nkari na acho 90% nke ikpe kachasi nma n’obodo a, a na m eche na site ugbua gawa na m ga ebido ebe a na ebe ozo .
Daalụ Sander! Mmakụ! Paul.
dom = ụbọchị nke ọnwa
dow = ụbọchị izu
ọ dị mfe ma ọ bụrụ na ị na-akpakọrịta
Daalụ nke ukwuu, nke a zuru oke ma kọwaa nke ọma.
Nke a bx otu ihe ahx onye nkuzi OS m nyere any, anagh [agbanwe ihe qbxla, ugbu a ahxtara m ihe mere klas a ji jie njo.
Ajuju, enwere ike ịbelata oge ọrụ?
Dịka ọmụmaatụ enwere m ọrụ a na-eme ugboro ugboro ọ bụla 5 nkeji, na ikwughachi ma ọ bụrụ na ọrụ a ka nọ n'ọrụ, gbuo ya ma gbaa ọsọ ọzọ.
Kedu ihe iwu nyere n'otu ọnụ iji tinye ọrụ na crontab (na-abanyeghị na crontab ma tinye ha na 'crontab -e' ma ọ bụ jiri crontab ọzọ jiri crontab ọzọ dochie crontab).
Ebumnuche bụ ịmepụta edemede mpụga iji tinye ọrụ na crontab
ọ dị m ka ị nwere ike iji 'echo' ihe ọ bụla ịchọrọ ịgbakwunye '| pusi >> 'cronotab path (/ etc / cronotab)' «
Kedu otu okwu ga-esi mee kwa ụbọchị atọ ọ bụla
Zaghachi Rafael Vera
Enwere m nsogbu ịrụ ọrụ cron.
Ana m arụ ọrụ na-esonụ na cronta -e:
01 * * * * mgbọrọgwụ /home/user/script/mfile.sh
ma arụghị ọrụ ahụ. Enyochawo m na myfile.sh nwere ikike igbu ya na onye ọrụ nke na-eme ya bụ mgbọrọgwụ.
Ana m arụ otu ọrụ ahụ na / wdg / crontab na mgbe ịmalitegharị ọrụ ahụ, ọ naghị arụ ọrụ maka m.
Ọdịnaya nke myfile.sh bụ iwu na-emelite DB ma ọ bụrụ na m na-agba ya na njikwa ọ na-arụ ọrụ.
echiche ọ bụla ihe nsogbu nwere ike ịbụ?
Onye ọrụ nchekwa data nwere ike ọ gaghị enwe ikikere niile yana ị ga-ebu ụzọ bupụ mgbanwe dị gburugburu ebe obibi site na injin nchekwa data gị.
Dịka ọmụmaatụ na db2 akara a ga-aga na mmalite nke edemede ahụ
. / ulo / db2inst1 / sqllib / db2profile
Ihe ọzọ nwere ike ịbụ na edemede ahụ chọrọ njikọ na nchekwa data, mee njikọ na nchekwa data n'ime edemede ahụ
Amaghị m na m ga-amalitegharia crond, m na-alụ ọgụ na nke a nwa oge
Ha ga-ama otu esi egosi na a na-arụ ọrụ ahụ na njedebe ọnwa ọ bụla, n'oge egosiri .. nkọwa a bụ na enweghị m ike ị nweta otu m siri mara na ọ na-ewe ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa ọ bụla .. ??? Ekwesiri m ide ha n'otu n'otu mana mgbe njedebe nke ọnwa February bịara na ọ bụ biciesto ọ gbagwojuru m anya ..
Kedu ka m ga-esi kwụsị usoro a na-eme na crontab?
usoro * …………
O nwere ike ịbụ na ị nwere ike inyere m aka? eu tenho um akwukwọ site minha dere nke na-anaghị arụ ọrụ ọ bụla crontab! jб dei niile ikikere, ọ dịghị onwe kpọmkwem cron ma ọ bụ onye ọrụ nwere ike igbu ya-ọtụtụ ihe ọ bụla na-eme! Ọ ga-amasị m ịmara ma ị ga - enyere m aka, ụfọdụ ihe ndị ọzọ anaghị arụ ọrụ! Ugochukwu
Kedu ka ị ga - esi tinye ọrụ iji na - agba ụbọchị ọ bụla ikpeazụ nke ọnwa (ụbọchị: 31-30-28)?
Dịka ị maraworị, a na-eji iwu su iji gbanwee onye ọrụ na njikwa. Ọ bụrụ na m jiri iwu su otú a: "onye ọrụ gị" gbanwere onye ọrụ mana na-enweghị ntọala kwesịrị ekwesị nke "onye ọrụ", ọ bụrụ na m na-agba ọsọ su dị ka: "su - user" gbanwere onye ọrụ site na itinye ntọala onye ọrụ. Na cron m na-egosi onye ọrụ, mana kedu ka m ga-esi tinye ntọala nke onye ọrụ a?
Ma ọ bụrụ na m chọrọ ịkwụsị ya?
Amaghị m ihe m na-emehie, mana m na-agbaso usoro ndị a na-emeghị ihe ọ bụla. Agbalịrị m:
59 * * * * / usr / biini / gedit
* * * * * / usr / biini / gedit
* * * * * * mgbọrọgwụ / usr / biini / gedit
* * * * * * usr / biini / test.sh
* * * * * mgbọrọgwụ usr / biini / test.sh
ọ dighi kwa ihe ọ bula. Ọ naghị eme ihe ọ bụla. Enweela m na ihe niile.
Enwere ike nwalee Firefox Onye Mmepụta Edition. My mbụ kọntaktị
Obere nyocha na nyocha nke Slimbook, akwụkwọ ọgụgụ ultra na-eku ume GNU / Linux